दाङ र रुपन्देहीमा चट्याङ लागेर ६ जनाको मृत्यु, मोटरसाइकल दुर्घटनामा एकको मृत्यु – Jaljala Online
असार १०, बुटवल, रुपन्देही र दाङमा मंगलबार चट्याङ लागेर छ जनाको ज्यान गएको छ । रुपन्देहीमा तीन जना र दाङमा तीन गरी छ जनाको मृत्यु भएको हो ।
दाङमा ट्रककाे ठक्करबाट माेटरसाईकल चालककाे मृत्यु
दाङमा ट्रककाे ठक्करबाट माेटरसाईकल चालककाे मृत्यु भएकाे छ ।
मंगलबार बेलुकी साढे ८ बजेतिर घोराही उपमहानगरपालिका– १० सौडीकुलामा घोराहीदेखि तुलसीपुरतर्फ जाँदै गरेको ना ६ ख २६३४ नं.को ट्रकले विपरीत दिशातर्फ हिडिरहेको रा १ प ५३३१ नं. को मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा मोटरसाइकल चालक ३३ वर्षीय कमानसिंह वलीको मृत्यु भएको छ ।
प्रहरीका अनुसार घोराही उपमहानगरपालिका- जलौराका घाइते वलीलाई राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराहीमा लैजाँदै गर्दा बाटोमै उनको मृत्यु भएको थियो ।
नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको समूहका चार नेता, कार्यकर्ता पक्राउ परेका छन् । सो समूहका राप्ती ब्युरो सदस्य गोर्खबहादुर कामीसहित चार जना नेता कार्यकर्ता गएराति पक्राउ परेका हुन् ।
त्रिवेणि गाउँपालिका–१ सिन्तुवाङबाट आठबीसकोटका कामीसहित दीर्घराज गहतराज, छविलाल घर्ती र युवा सङ्गठनका जिल्ला उपाध्यक्ष विवेक बिक पक्राउ परेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक सुमित खड्काले जानकारी दिए ।
प्रहरी टोली पुग्दा उनीहरुले शंकस्पद गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका र सोधपुछ गर्दा प्रहरी टोली माथि नै हातपात गरी अभद्र व्यवहार देखाएपछि पक्राउ गरिएको उनले बताए ।
पिसाब किन पोल्छ, के हुन्छ यसको असर ? जानी राखौ